SHEEKO GAABAN:-Ma run baa in rag waa hore jiray lagu salladay gabar oo ay xiniinyaha ka bixin jirtay kii dhashaba? | Voice Of Somalia
SHEEKO GAABAN:-Ma run baa in rag waa hore jiray lagu salladay gabar oo ay xiniinyaha ka bixin jirtay kii dhashaba?
Posted on July 29, 2016 by Voice Of Somalia Image
Qisadaan waxaa la leeyahay waa qiso dhacday anigana waxaan maqlay anigoo yar. Gabadhu waxay ahayd boqorad waxayna u talin jirtay qoonkii markaas la noolaa. Waxay lahayd ciidan daacad u ah oo fuliya amaradeeda. Waxay ku amartay naag kasta oo wiil dhasha in ay keento wiilka.
Dabadeedna waxay amri jirtay in xiniinyaha laga bixiyo lana koriyo illaa uu xoog ka yeesho. Intaas ka dibna waxaa laga dhigi jiray askari daacad u ah boqoradda. Ilaahay baa wuxuu ka xifdiyay mid yar oo markaas dhashay daalimaddaas ragga goysay. Wiilkiibaa koray ama waynaaday inkastoo dhib badan lagala kulmay korintiisii. Gabadhu waxay maalin walba u keentaa ragga xujo aysan furi karin maxaa yeelay waa rag ay ka maqan yihiin xubno muhiim ah waxaana ku adag inay sida nin fayaw u fakaraan. Goortay daalaan oo xujada ay furi waayaan ayay u tagaan rajulkii Ilaahay ka badbaadiyey boqoradda oo god lagu ilaaliyo. Markaasuu u soo sheegaa xaalku siduu yahay.
Kadibna boqoraddii baa la hordhigaa xal u helidda xujadeedii markaasay xanaaqdaa oo u gooddidaa ragga markaasey ku celisaa baaris hor leh si loo hubiyo in ragga ay ku jiraan qaar xiniinyo leh ilayn xujada meesha taal ma furi karaan rag aan xiniinyo laheyne. Markay isugu darto ciqaab iyo inay mar labaad cawradoodii faydo oo moraal ahaan iyo jir ahaanba loo dilo ayay shaqo cusub u dirtaa.
Markii sabankii dheeraaday raggiina go’ay ayuu rajulkii go’aan qaatay. Wuxuu dajiyay khiddadii looga takhalusi lahaa duqdaan baas oo ragga lagu salladay. Wuxuu yiri casuuma boqoradda una sameeya fadhi qurux badan oo xariir lagu goglay ilayn boqor iyo xariir la kala raacye. Wuxuu yiri intaan fadhiga la dhigin meesha ceel dheer ka qoda dabadeedna ku kor gogla xariirta.
Markay damacdo in ay fariisato waxay ku dhici doontaa ceelkaas ee halkaas ku rajmiya. Markaad dishaana ii yeera. Sidii baa layeelay waana lagu guulaystay dadkiina wixii ka haray rajulkiibaa badbaadiyay. Caddaalad buu ku dhaqey bulshadii wixii intaa ka dambeeyey. Wiilashii xiniinyaha laga bixin jirayna waa badbaadeen.
Ayaan aan tagay gobollada Bari ayaa waxaan arkay dhagxaan meel la tubay oo aad buuro moodo inta ay la’eg yihiin. Waxaa la igu yiri waa meeshii habartii baas lagu rajmiyay. Dulucdaydu ma ahan in aan sheekada rumeeyo ama beeniyo waxayse shabahdaa qormada aan soo wado. Sidaas darteed baan gogoldhig uga dhigtay sheekada iyo ninka ka badbaaday habartaas raga gowsay!
Qofna kama qarsoona waxa maanta ka dhacaya hareeraha adduunka. La isumana qariyo wixii waa hore sir ahaan jiray maanta banaankay yaallaan. Dhammaan waxaa la isu geeyay ciidamadii qalabka siday hadday yihiin gaalo ama kuwa sheegta Muslimiinta. Waxaa la baadi goobayaa hal nin oo lagu tuhmayo in ay xiniinyo ku jiraan.
Gaalada waa gartood mar kasta oo ay is dhahaan wixii Muslimka sheeganayay waad xiniinya bixiseen, oo ma jiri doono cid danihiina ka hor imaan doonta meel aysan ka filayn bay ka bilaabataa. Markaasay raggii agtooda joogay ee buurbuurnaa – ilayn waa koramo la xiniinyo bixiyay – baa la garaaci oo la dhihi yaa idin ku dhex jira? Yaa furay xujadii adkayd? Keena ragga halla baaro mar labaad.
Markaasaa waxaa lagu samayn wixii la doono oo xumaan ah. Illaa haddana dhibku wuu socdaa. Habartii baas oo muddo laga nastayna waxaa baddalay gaalo kibirtay oo aan ehelnimo iyo diin toona kuu dhaafayn. Anigu imtixaankii habarta ma aanan soo gaarin laakiin haddaan mixnadaan dhex fadhiyaa. Ilaahay ha iga badbaadiyo aniga iyo adinkaba. Aamiin. Aamiin.
Darwiishkii Kowaad Sayid Maxamed Iyo Soomaalidii ka Horjeeday Maxay Isku Hayeen
Why Muslim officers are leaving KDF